Kuki anaghị adịte aka karịa uru: Otu njirimara na njirimara onwe onye na-agbanwe na ụwa post-kuki | Martech Zone
Mgbe anyị bara n'ime ngwa Uber anyị, ọ na-akpachapụ anya ebe anyị na-adịbeghị anya. Mgbe anyị gara na ebe nrụọrụ weebụ uwe, anyị na-ahụ ihe ndị atụpụtara sitere na ihe ndị anyị zụtara na mbụ. Mgbe anyị na-agagharị na-ama ụlọikwuu na ntanetị, anyị na-eje ozi ngwa ngwa ọkọlọtọ dị mkpa maka ngwa ahịa ahụ. Mgbe anyị mepere Google ma ọ bụ Apple Maps, a na-enye anyị ebe ndị mmadụ na-agakarị na-adabere na oge na ọnọdụ dị ugbu a. Ihe niile gbasara ịhazi onwe ya na ihe niile sitere na otu ihe - njirimara anyị.
Ruo ọtụtụ afọ, naanị otu ụzọ ndị ahịa dijitalụ nwere ike isi nweta ozi a bụ kuki ihe nchọgharị. Na mbu, ebughi kuki ndị a ka ejiri mee ihe maka nchekwa nchekwa mmadụ, kama icheta ihe masịrị ha. Mana, ka oge na-aga, kuki ngwa ngwa ghọrọ njedebe niile maka njirimara onye ọrụ na ịntanetị.
Mkpụrụ nke kuki nke atọ
Taa, ọtụtụ ndị ahịa dijitalụ ka na-adabere na kuki ndị ọzọ maka mgbasa ozi ezubere iche - na-eji ya dị ka ngwá ọrụ iji kpokọta ozi gbasara ndị ahịa. Agbanyeghị, ndị ọzọ na-azụ kuki ndị ọzọ na-elekọta ndị na-azụ ha mere ọ bụghị nye ikike ozugbo iji chekwaa data ha - nke na - akpata ndozi dị egwu ka ndị ahịa na - amatacha nzuzo ha.
N'ihi ya, Firefox na safari emeela ihe iji gbochie kuki ndị ọzọ na usoro ndị ọzọ na-egosipụta onye ọrụ na-enweghị nkwenye ha. Google Chrome bu onye oru nyocha ohuru ohuru ime otu ihe, na-ekwuwaputa na o ghaghi ikwusi kuki kuki nke ato n’ime afo abuo na abia. Site na ngagharị a na nso nso a site na ihe nchọgharị, ọtụtụ na-echegbu onwe na enweghị ịhazi onwe ya ga-eme ka ahịa dijitalụ ghara ịdị irè.
Ọ gwụla ma anyị dịka ụlọ ọrụ na-eme ihe banyere ya, anyị ga-enwe mgbasa ozi zuru oke-na ọkwa zuru ụwa ọnụ.
Ndị Dị Mkpa Ndị Ahịa Dijitalụ Dị Mkpa Iji Mee
Kedu otu ụlọ ọrụ ịzụ ahịa dijitalụ ga-esi zere ọnọdụ a n'ime izugbe? Ọtụtụ ụdị agbanweela na ebumnuche gburugburu - ịdabere na ihe ndị dị ka ihu igwe ma ọ bụ ihu peeji na weebụsaịtị iji mepụta nro nke ịhazi onwe. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike inye aka mee ka mgbasa ozi ha dịkwuo mkpa nye ndị na-azụ ahịa, ọ ga-abụrịrị ụzọ ọzọ iji guzobe ma jigide njirimara na usoro nke nzuzo.
Agbanyeghi na ha amatachaala ihe ha zoro ezo, ndi ahia gha acho itinye aka na udiri ihe di nkpa. Ka emechara, "ahaziri" pụtara dị ka 2019 okwu nke afọ Dabere na nyocha nke Association nke Ndị Mgbasa Ozi Mba nke ndị na-ere ahịa ahịa kachasị ukwuu n'ụwa.
Kedụ ka ndị ahịa ga - esi dezie njikọta ihe dị n’etiti mmadụ na iche ya na nzuzo?
Ngalaba-ngalaba nke mbụ na njirimara nke kuki nke mbụ: Mgbe kuki na-adịbeghị anya agbadata na kuki ndị ọzọ, ọ bụghị kuki niile kwesịrị ka e lere anya ekweghi ekwe. Akara nwere ike iji kuki nke mbụ iji chekwaa data onye ọrụ iji hazie mgbasa ozi ma ọ bụ ọdịnaya dabere na nkwenye ndị ahịa. Usoro nchịkọta data a anaghị achọ onye na-azụ ahịa ka ọ mata onwe ya site na ozi njirimara nke onwe; kama, ọ na-ekenye NJ amaghi aha iji mepụta mgbasa ozi na ọdịnaya a haziri ahazi.
Onye ọrụ nbanye dabeere njirimara: Site na atụmatụ e weere "ahịa ndị mmadụ," ụdị nwere ike ịmata ndị ahịa gafee ọtụtụ ngwaọrụ na ọwa site na saịtị dị iche iche na ngwa ha abanye. N'ihi na ọ na-achọ onye na-azụ ahịa ka ọ mata onwe ya, atụmatụ a chọrọ nkwenye ndị ahịa iji kwenye na ịkekọrịta njirimara na data ha na ndị ọzọ. Ozugbo ndị ahịa nyere nkwenye ha, ụdị dị iche iche nwere ike iji mpempe ozi ahụ iji chọpụta ndị na-azụ ahịa na saịtị ha abanyela. Ahịa ndị mmadụ na-achọkwa nkwado site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke saịtị iji nwee ike ịba ụba.
Otu ihe dị mkpa bụ eziokwu maka ụzọ abụọ ahụ: hụ na nzuzo data ndị ahịa site na nkwenye. Ekwesiri iji data ọ bụla nke onye na-azụ ahịa kesara iji maka ebumnuche ahụ ma naanị ya ga-ekenye ndị ọzọ na nkwenye.
Na iwu nzuzo ọhụrụ dịka GDPR na CCPA, ekwesighi ka amata ndi ozo ma kegide ha na data ha site na ozi nke njirimara nke onwe ha n’enweghi nkwenye.
Dika a na-amanye ndi mmadu ka ha buru ndi ozo nke ndi ahia karie site na iwu ma na-agaghari na ihe nchọgharị na-ekwenye ihe nzuzo, egwu na-abawanye n'etiti ndi ahia dijitalụ banyere otu esi edozi usoro ha ka ha wee diri ndi ha na ha agha.
Site na ịnabata oge ọhụụ nke njikwa data njikwa, ụdị nwere ike iji obi ike jiri data akwadoro iji nyekwuo ahụmịhe ndị ahịa ahaziri iche.
Tags: apụl mapccpanchekwa ndị ahịakukiikpo okwu dcomkpisiakafirefoxkuki nke mbụnjirimarabanyeenweghị kukikeonweonye nke atọ
Diaz Nesamoney bụ onye ọchụnta ego teknụzụ rụzuru nke tọrọ ntọala ụlọ ọrụ teknụzụ atọ na-aga nke ọma, ha niile na-ejikwa ike nke data iji nweta ngwa ahịa na ngwa ndị ahịa. Ugbu a, Diaz bụ onye guzobere, President na CEO nke Jivox, ụlọ ọrụ na-enye teknụzụ teknụzụ maka data na mgbasa ozi ahaziri iche na ịre ahịa. Diaz bụkwa onye edemede nke akwụkwọ mbụ na iji data na teknụzụ na- hazie dijitalụ mgbasa ozi.